स्तन फेर्न सकिने प्रविधि नेपालमै आयो - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
स्तन फेर्न सकिने प्रविधि नेपालमै आयो
२१ कार्तिक २०७५, बुधबार ११:३६ November 7, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडौं । स्तन क्यान्सर भएका महिलाले नेपालमा कृत्रिम स्तन राख्न सक्ने भएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ललितपुर हरिसिद्धिस्थित नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले नेपालमा स्तनपानका रोगीले नयाँ फेर्न सक्ने जानकारी दिएको हो ।
बुधबार वुमन चेम्वर अफ कमर्सका सदस्यहरुलाई स्तन क्यानसरसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिइएको छ । स्तनपान सचेतना महिनाको अवसिर पारेर उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा मिडिया, हेल्थ र ह्याप्पीनेस मोटिभेसनल ट्रेनर सिमोन नेउपानेले स्तन क्यान्सरसँग जुध्न अपनाइने मेडिटेसनको प्रदर्शन गरेका थिए ।
अस्पतालका सर्जिकल अन्कोलोजी विभाग प्रमुख डा. कपेन्द्रशेखर अमात्यले स्तन क्यानसरबारे सहभागीलाई विस्तृतमा जानकार।ी गराएका थिए । उनले स्तन क्यान्सर भएको जानकारी समयमै चिकित्सकलाई गराउन सकिए स्तन काटेर फल्न बाध्य नहुने प्रष्ट्याए ।
उनले स्तन क्यान्सर भएर स्तन गुमाउन बाध्य महिलाहरुका लागि नयाँ स्तन राख्न सकिने प्रविधि नेपाल भित्रिइसकेको उल्लेख गरे । उक्त प्रविधिलाई अन्कोप्लाष्टिक ब्रेष्ट सर्जरी भनिने बताए ।
डा. अमात्यले नेपालका चिकित्सक जस्तोसुकै जटिल स्तन क्यान्सरको उपचार गर्न पनि सक्षम रहेको जनाए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्राले क्यान्सरसँग लडिरहेका व्यक्तिहरुको सहायताका समाजका सबै तह र तप्का एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
वुमन चेम्वर अफ कमर्सकी अध्यक्ष डा. अञ्जन शाक्यले कामकाजी र व्यवसायिक महिलाहरुको क्यान्सर रोकथाम स्वास्थ्य जाँचका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमको महत्व रहेको प्रकाश पारिन् ।
लामखुट्टे हिमाली क्षेत्रमा छिरेपछि कालाजार रोग पनि पुग्यो
कुर्सीले हानेर शिक्षकको टाउको फुटाए जनप्रतिनिधिले